Rfid Lf / hf / uhf Akhriste / qoraa soosaarayaasha - Shiinaha Rfid Lf / hf / uhf Akhristaha / Soo-saareyaasha & Warshad
Rugged pcb android casriga taleefanka gacanta android 9.0 gacanta uhf rfid barcode scanner pda 4g
Naqshadeynta kumbuyuutarrada warshadaha & bini-aadamka adag iyo shaashadda taabashada 5.5 inji Gorilla Glass 3 taabashada oo ay weheliso qaraar sare oo ah 720 * 1440 bandhig ayaa la jaan qaadi doonta heerarka sarsare ee saadka, xawaaraha iyo tafaariiqda
Android Industrial PDA Bluetooth WiFi Xararad RFID Terminal Mobile Computer Barcode Scanner
Wax soosaarka taxanaha ah ee MD5000C wuxuu ku fidiyaa silsiladaha wax soo saarka Xannaada-Wareegga ee Android OS 7.0 oo leh 4G xiriir isgaarsiineed xawaare sare leh. Gudaha qalabka gacanta, isugeynta heerka IP65 caddeynta biyaha / siigada, 1.5m / 4.5ft dhibic badbaadin, naqshad ergonomic ah, qaab dhismeed saa'id ah, tikniyoolajiyad deg deg ah, iyo 5.0 inji adag Gorilla Glass 3 shaashad dhammaantood waa qalabaysan si loo hubiyo waxqabadka . Ugu dambeyntii 1.3GHz processor afar geesle ah 2GB RAM / 16GB ROM iyo illaa 32GB ballaarinta ayaa dhammaantood loogu talagalay inay kor u qaadaan heerka khibradda.
Rakhiis Gacan Dheer Barcode Scanner Windows Mobile Pda RFID Reader
Wax soosaarka taxanaha ah ee MD947H wuxuu ku fidiyaa silsiladaha Alaabada Xanibada-Wareega ah Android OS 7.0 oo leh 4G isgaarsiin xawaare sare leh 4G.
Jaban OEM Qalabka Warehouse Saadka ee Smart PDA Pos Nidaamka UHF Rfid Reader
Waxyaabaha taxanaha ah ee loo yaqaan 'MD801NB' waxay si ballaadhan ugu fidinayaan silsiladaha wax-soo-saarka Xannaanada-Wareegga ah kiniinka warshadaha ee Android OS 7.0 Gudaha kumbuyuutarrada is haysta, heerka xirashada IP65 biyo / boodh caddayn, 1.5m / 4.5ft dhibic badbaadin, naqshad ergonomic ah, qaab dhismeed aad u ballaadhan, batteriga 8000mAh gudaha aad u ballaaran, iyo 8.0 inji adag Gorilla Glass 3 ayaa dhammaantood u qalabaysan inay hubiyaan waxqabadka. Si dhakhso ah 1.5GHz octa-core processor 2GB RAM / 16GB ROM iyo ilaa 128GB ballaarinta ayaa dhammaantood loogu talagalay inay kor u qaadaan heerka khibrada.
Supermarkt Support PDA QR Code Scanner Warshadaha Lacagta Taleefanka Mobilada ee PDA
Waxyaabaha taxanaha ah ee MD711H waxay sii dheereynayaan silsiladaha wax soo saarka ee Xannibaadda ee loo yaqaan 'Android OS 7.0 tablet'. Gudaha kumbuyuutarrada is haysta, heerka xiritaanka IP65 caddeynta biyaha / siigada, 1.5m / 4.5ft dhibic badbaadin ah, naqshad ergonomic ah, qaab dhismeed aad u ballaaran, batteriga 10000mAh gudaha aad u ballaaran, iyo shaashadda 7.0 inji ee adag Gorilla Glass 3 9H dhammaantood waa la qalabeeyay hubi waxqabadka. Si dhakhso ah 1.3GHz afar-geesood ah processor 2GB RAM / 16GB ROM iyo ilaa 32GB ballaarinta ayaa dhammaantood loogu talagalay inay kor u qaadaan heerka khibrada.
Taabasho Qalabka Taabashada Qalabka Bixinta Qalabka Mashiinka POS Qiimaha Windows 7 softiweerka Diiwaangelinta Lacagta ee iibka ah
Qalabka kor ku xusan waa la damaanad qaaday hal sano !!
P18-L2 Kaarka Baska ansixiyaha USB buska rfid aqriyaha kaarka casriga ah
P18-L2 Bus Validator wuxuu taageeraa dhammaan kaararka casriga ah ee u hoggaansamaya ISO14443 Nooca A & B, Mifare Classic, DESFire, FeliCa, oo ku dhex-jira processor awood leh oo 32bit ARM Cortex-A9 ah. Waxaa jira 4 SAM saldhig oo loogu talagalay qabashada Iibsashada SAMs si loo hubiyo amniga iyo daacadnimada macaamil ganacsi.
La xiriir IC Card Reader Iyadoo Wajahadda USB
T6 wuxuu korsadaa RS232 & USB interface, hoos u dhig kaarka. Awoodda ku shubida kumbuyuutarka ama interface-ka USB-ga iyo USB-ga waxaa lagu qalabeeyaa tiknoolaji aan darawal ahayn. M6 waa mid aad ufiican waxay taageertaa 4 kaararka kaararka. Afka kaarka weyn wuxuu ku habboon yahay habka shaqada caadiga ah
T200 Metro Module Reader Module Xiriir la'aan RS232 Interface Linux 3.0 Industry Leverl Metro Tigidhada Kaarka Akhristaha Kaarka
T200 waa akhristaha heerka warshadaha ee ka shaqeynta tikidhada metro. Waxay taageertaa dhammaan kaararka casriga ah ee u hoggaansamaya ISO14443
Nooca A & B, Mifare, oo lagu dhex dhisay processor awood badan oo 1G Hz ARM A9 ah si uu u maamulo Linux OS. Oo waxaa jira ugu badnaan 8 boosaska SAM si ay u taageeraan nidaamyada furayaasha badan.
T10-DC2 Module Taageerada Module Akhristaha Akhriska Taageerada ISO7816 xiriir / xiriir la'aan / kaarka magnetic
T10-DC2 waa 3-1-1 aqriste / qoraa module ah, oo ay kujiraan kaararka smart smart, kaararka aan xiriirka laheyn iyo kaararka xargaha birlabta. T10-DC2 wuxuu la yimaadaa anteeno la goyn karo, xiriiriyaha isku xira kaarka smart, madaxa birlabta iyo 4 SAM sockets.
D8N NFC Reader 13.56Mhz Contactless USB RS232 Interface NFC qoraa kaarka akhristaha kaarka
Akhristaha 'D8 NFC Reader' waa akhriye ku xiran kombuyuutar oo u hoggaansamaya astaamaha ikhtiyaariga ah ee NFC oo buuxa, oo lagu soo saaray iyada oo lagu saleynayo tiknoolajiyadda aan lala xiriirin ee 13.56MHz Waxay leedahay 4 SAM (Module Helitaanka Hubka Sugan) boosaska kaas oo ku siin kara damaanado heer sare ah oo ku saabsan macaamil ganacsi aan lala xiriirin karin.
13.56MHZ ISO14443 Nooca A / B USB Smart Card Reader
NC8 akhristaha kaarka caqli la'aanta ah ee xiriir la leh xiriiriyaha PC-ga ee xiriir la leh PC-ga 13.56MHz Contactless (RFID) oo la raacayo Isgaarsiinta Goobta dhow (NFC), oo aan taageerin oo keliya kaararka ISO 14443 A iyo B laakiin sidoo kale NFC iyo FeliCa teknoolojiyada aan lala xiriirin, u hoggaansamida CCID.